UShauwn uthi nakanjani iRoyal AM izodlala kwiDStv Premeirship ngesizini ezayo - Impempe
UShauwn uthi nakanjani iRoyal AM izodlala kwiDStv Premeirship ngesizini ezayo
Akangabazi ngokuthi iRoyal AM izodlala kwiDStv Premiership ngesizini ezayo uShauwn Mkhize oyisikhulu sallei qembu. Ukusho lokhu nje iqembu lakhe laqeda phezulu kwiGladAfrica Championship okulinika igunya lokunyuselwa kwiPremiership.
Nokho lokhu akukenzeki njengoba kusenecala elisenkantolo isinqumo salo esizophuma ngoMgqibelo. Le mpicabadala yombango ngeqembu elidle umhlanganiso ngesizini ka-2020/21, kulindeleke ifinyelele esiphethweni ngoMgqibelo.
Inkantolo ibiphothulile bonke ubufakazi ngoLwesihlanu, osekusele manje ukuthi ngoMgqibelo kumenyezelwe ukuthi ngobani ompetha.
Konke kuqale ngesikhathi kuphuma isinqumo secala ebeliphakathi kweSekhukhune nePolokwane City. ICity ilahlwe yicala kwase kwathathwa amaphuzu anikwa iSekhukhune. Lokhu kususe omkhulu umsindo njengoba udaba selugcine lusenkantolo enkulu yaseGoli.
UShauwn ongumphathi weRoyal AM, ebambisene nendodana yakhe, u-Andile Mpisane, uthe yena emqondweni wakhe usezithatha njengompetha weChampionship noma ngabe sithini isinqumo senkantolo.
“Mina ngizithatha njengompetha okwamanje. Anginandaba nokuthi isinqumo sizothini kusasa (ngoMgqibelo). Engikwaziyo ukuthi ngidlale imidlalo engu-30, futhi ngiqede phezulu kwilogi.
“Laba abafuna ukuwina imidlalo emahhovisi angihlangene nabo, thina siwine ensimini,” kusho uShauwn, osedume ngelikaMaMkhize.
Ubekhuluma ngesikhathi kunomcimbi wokuhlonipha iRoyal AM, AmaZulu FC neLamontville Golden Arrows e-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre, eThekwini, ngoLwesihlanu. Lo mcimbi ubuhlelwe nguMnyango weMeya yaseThekwini, uMxolisi Kaunda.
UShauwn uthembise ukuthi uzolwa ngayo yonke indlela ukuze athole indebe yeChampionship akholwa wukuthi kumele kube ngeyabo.
“Engingakusho ukuthi ngeke iqale isizini uma kuphuma isinqumo okungesona ngoba ngizolidlulisela phambili nakanjani icala. Ngifingqe imikhono, ngizolwa ngayo yonke indlela,” kusho uShauwn ehleka ebheka ngakuMato Madlala obekhona naye kulo mcimbi njengosihlalo we-Arrows.
Okuhlalukile wukuthi uShawun ubezwakala futhi ebukeka enokuzethemba ngesikhathi ekhuluma ngaleli cala. Sekuzocaca ngoMgqibelo ukuthi yiliphi iqembu elizophakamisa indebe bese linyukela kwiDStv Premiership ngesizini ezayo.
Previous Previous post: Sekuzocaca ngoMgqibelo ngompetha beGladAfrica Championship
Next Next post: Iziveze njengeqembu elingayidla i-Euro i-Italy ibukisa ngeTurkey